Amin'ny farany, tsy ny taona ao amin'ny fiainanao no manisa. Fiainana izany amin'ny taonanao. - Abraham Lincoln - Quotes Pedia
Amin'ny farany, tsy ny taona ao amin'ny fiainanao no manisa. Fiainana izany amin'ny taonanao. - Abraham Lincoln
Isaky ny taona isika no isaina, sa tsy izany? Efa noeritreretinao ve raha io no fomba hanisana naharitra hafiriana? Rehefa mifarana ny andro dia tsy mbola isaina akory ireo taona eo amin'ny fiainanao izay mieritreritra! Izany dia momba ny fiainana amin'ny taonanao.
Rehefa mankalaza ny tsingerin-taona nahaterahantsika isika dia mazoto mandrehitra labozia amin'ny taona hahatongavantsika, saingy manadino isika fa tsy momba ny taona na ny isan'ny taona niainanao.
Ny fiainana ny fiainanao dia tsy momba ny taonany mihitsy, fa dia inona foana no nataonao mba hahatonga anao hanana fiainana mendrika foana? Tsy ny taona iainanao akory no tokony handrebireby anao!
Betsaka ny olona niaina nandritra ny taona maro nefa tsy nahavita na inona na inona. Etsy ankilany anefa dia misy olona vitsivitsy maty tamin'ny mbola kely, kanefa mbola tadidintsika foana izy ireo noho ny zavatra nataony ho an'ny hafa.
Izany no ahatsiarovan'ny lehilahy azy ny isan'ny taona iainany, fa ny zavatra nataony.
Raha tokony hanana fiainana maharitra ianao izay tsy mbola nataonao na inona na inona, dia zava-dehibe ny manao zavatra manan-danja amin'ny taona iainanao.
Raha te-hahazo antoka ianao fa mahatadidy anao ny olona na dia rehefa mandeha aza ianao, andramo hanao zavatra izay mahatonga azy ireo hirehareha anao.
Mametraha fiainana amin'ny taonanao, fa tsy manisa ny taonanao velona intsony!
Teny nindramina mifandraika:
Quotes fiainana malaza
Teny nalaza malaza nataon'ny olona malaza
Quotes fiainana manentana
Famaranana fohy ny fiainana
Teny lazaina amin'ny fiainana
Fika fohy ny fiainana
Teny lazaina sy fiainana
Teny fanitsiana ny fiainana
Fanentanana momba ny fiainana manosika
Teny nalaina momba ny fiainana
Ny fiainam-pahendrena fahendrena
Ianao irery no miaina tokana
Na inona na inona anao, dia mahaiza mankasitraka. - Abraham Lincoln
Tsy azonao atao ny mamolavola olona ho tsara, nefa mety ho iray tokoa ianao! Miaraka amin'ny olona maro manodidina…
Aza avela na inona na inona rahampitso izay azo atao anio. - Abraham Lincoln
Tsy tokony hiambina foana ianao rahampitso. Tsy nisy nahita izay tohiny rahampitso. Araka izany, ...
Tsy ho afa-miala amin'ny andraikinao rahampitso ianao amin'ny alàlan'ny fandotoana azy anio. - Abraham Lincoln
Tsy ho afa-miala amin'ny andraikinao rahampitso ianao amin'ny alàlan'ny fandotoana azy anio. - Abraham Lincoln Teny nalaina momba:
Mandeha miadana aho, fa tsy mizotra mankany aoriana. - Abraham Lincoln
Voalaza fa, "Miadana sy maharitra ny hazakazaka." Marina izany. Tsy mila mihazakazaka ianao…
Tadidio foana fa ny fanapahan-kevitrao mahomby hahomby dia zava-dehibe lavitra noho ny zavatra iray. - Abraham Lincoln
Ny zava-dehibe indrindra tokony hotadidinao dia ny fanapahan-kevitrao. Ity no tena be indrindra…
Quotes mifandraika amin'izany
Mampiasa mofomamy mba ho azo antoka fa hanome ny tsara indrindra ianao traikefa eo amin'ny tranonkala. Raha manohy mampiasa ity Ndao isika dia mieritreritra fa faly ianao izany.Ok